11 Rider Xigashooyinka Sicirka Qaddarka ee Kuu Dhiirrigelin doona - Kale
11 Si layaableh Rider Rider Xigashooyinka laga soo xigtay Aayadda Zero Anime
Weligaa ma dareentay waxa u eg inaad yeelato lataliye kuu gaar ah, ama qof aad u jeeddo?
Taasi waa nooca dabeecadda iyo shakhsiyadda Rider wuxuu ka yimid Fate Zero.
Ma aha oo kaliya madadaalo inuu joogo oo wuxuu jecel yahay qosol badan. Wuxuu dhiirrigeliyaa kuwa ku hareeraysan wuuna taageeraa Ka dhaafida Velvet erayo xikmad iyo waano ah.
Waana sifooyinkaas kuwa Riders ka dhigaya xigashooyin mudan in la xuso.
Haddii aad raadineyso qiyaasta dhiirigelinta iyo nostalgia, hubi kuwan 11 Rider wuxuu ka soo xigtay Fate Zero!
Rider Quotes Qeexitaanka Eber # 1
“Sharafta ayaa ka fog jihada fog. Ku xujee maxaa yeelay lama gaari karo. Ka hadal qabsashada oo muuji. ” - Fuula
Waan murugoon doonaa, waanan ooyi doonaa. Laakiin waligey ka qoomameyn maayo. ” - Fuula
Liidashada aad dareemeyso runti waa tayada boqorka. Waad cabaadi kartaa wax badan, laakiin waad ogtahay sida aad u yar tahay. Haddana waxaad weli halgan ugu jirtaa inaad gaarto heerar ka sarreeya sidaad malayn karto. ” - Fuula
“Waxaan u maleynayaa in magacaaga lagu qoro buugaagta taariikhda ay tahay qaab aan dhimanayn. Laakiin haddii taasi macnaheedu tahay in magacaaga la beddelo muddo laba kun oo sano ah oo aan wax kale jirin, waxaan jeclaan lahaa in xitaa boqol meelood meel lagu daro noloshayda dhabta ah. - Fuula
Dhamaanteen miyaanay ahayn, sax?
anime ugu sareeya 50 waqtiga oo dhan
Inaad guuleysato, laakiin aadan baabi'in; inaad guuleysato, laakiin aan ceebeyn: Taasi waa waxa guuleysiga dhabta ahi yahay! - Fuula
Wax kastoo aad sameyso, ugu raaxeyso sida ugu buuxda. Taasi waa sirta nolosha. ” - Fuula
Xigasho A jecel ee Riders.
Kaliya nin geesi ah oo geesi u ah inuu dhinacayga ka dagaallamo ayaa sayidkayga noqon kara weligiis. Fulay bilaa geesinimo ah oo xitaa is muujiya meel ugama dhowa inuu istaahilo! ” - Fuula
'Ku guuldareysto inaad garaacdo cadowga markii aad ogaato halka ay ku sugan yihiin, waana xilli dambe inaad xitaa ka qoomameyso inaad fursad lumisay.' - Fuula
Haddii aadan ruxin fiidmeerta, marnaba ma heli doontid fursaddaada inaad wax garaacdo.
Adeegsiga hab fudud oo lagu fuliyo wax cajaa'ib leh, aad ayaa looga dheereeyaa iyadoo la adeegsanayo qaab isku dhafan oo lagu gaaro isla wax. - Fuula
'Markaad maalin uun hesho hab nololeed aad runti ku faani karto, waxaa lagugu qasbi doonaa dagaalkaaga haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba.' - Fuula
Mid ka mid ah Wadayaasha ugu fikradaha kicinta fikirka.
“Boqorka waa in uu ku noolaadaa nolol ka cadaa badan kuwa kale oo uu noqdaa qof caan ah oo lagu wada qanco! Boqorka ayaa ah kan uruuriya xaasidnimada halyeeyadiisa oo dhan wuxuuna u istaagaa sidii hogaamiye! - Fuula
Ugu dambayntiina Baaskiilku wuxuu sheegaa kii ugu dambeeyay Taxanaha Feejignaanta 'Zero Anime'.
La wadaag xigashooyinka aad jeceshahay shabakadahaaga bulshada.
Waxaad ka hubin kartaa qoraallo badan oo la xiriira hoosta.
jeex ugu fiican nolosha anime 2015
jeex ugu fiican nolosha anime 2018